Rodobe 3 okt : tsy maintsy hisy ny sommet des chefs de file !
Andriamatoa Guy Maxime dia nanao tatitra ny dian'izy ireo tany Mahanjaga ny faran'ny herinandro teo. Isaorana hoy izy, ny Filoha Ravalomanana niditra mivantana tany an-toerana. Efa ao amin'ny Magro ihany koa hoy izy, ny Rodobe no manatanteraka ny hetsika isaky ny Sabotsy. Nanambara ihany koa Andriamatoa Guy Maxime, fa i Andry Rajoelina no tokony hanambitamby ny filoha telo lahy hiresaka aminy satria izy no fototry ny krizy, ka na hiresaka na tsia i Andry Rajoelina dia tsy maintsy hisy ny sommet des 4 chefs de files. Noho izany hoy izy, dia tsy maintsy tanteraka ny fahatongavan'ny Filoha Ravalomanana sy Ratsiraka eto. Ho avy amin'ity herinandro ity, ny Troika hoy Andriamatoa Guy Maxime hametraka ny fampiharana ny tondrozotra.
Ny Depiote Zafilahy dia nanamafy, fa tsy Antananarivo no nanongana ny Filoha Ravalomanana, fa nisy ireo mpanao politika avy amin'ny faritany niaraka tamin-dRatsirahonanana sns..Ho avy ny Troika hoy ny Depiote Zafilahy ka ho hita eo ireo avy any amin'ny faritra. Koa mampitandrina izahay hoy ity olomboafidy ity, fa tsy ekenay intsony ny fisakanana ireo fiara avy any amin'ny faritany toy ny tamin'ny 19 Febroary teo.